Tian'i Apple ny mpampiasa azy hiala amin'ny charger sandoka | Vaovao IPhone
Ny adihevitra momba ny charger sandoka ao amin'ny fitaovan'ny Apple dia mitohy hatrany amin'ny farany ambany amin'ilay lohasaha, Ary izany dia mihabe ny tranga misy amin'ireo fitaovana iOS miaraka amin'ny bateria izay simba tanteraka noho ny fampiasana charger izay tsy manana ny fepetra fiarovana tokony hapetraka. Misy zavatra tsy mitombo tsara rehefa amin'ny telefaona avo lenta rehetra, tsy mandeha isika rehefa mividy kojakoja ilaina toy ny charger fa tsy noho ny vidin'ny Apple fa lafo, fa satria manana alternatera MFi eny an-tsena isika amin'ny vidiny mirary tokoa izany dia hamonjy antsika tsy ny fikorontanana ihany, fa ny olana ara-pahasalamana mety.
Apple dia lasa matotra amin'ny olana, ary rehefa tonga ny olana amin'ny bateria dia manipy ny rantsan-tànany miampanga amin'ny orinasa paoma ny mpampiasa, tsy mieritreritra fa mampiasa charger sy tariby manana fiaviana mampiahiahy ianao, toy ireo an'ny Mobile Star LLC izay nivarotra adaptatera sy tariby izay toa avy any Apple any amin'ny magazay toa an'i Amazon na Groupon.
Ity no hafatra navelan'i Apple tao amin'ny tranokalan'ny developer:
Ny adapter ho an'ny sandoka sy ny antoko fahatelo, ary koa ny bateria tsy voamarina, dia mety tsy noforonina araka ny tokony ho izy ary mety hiteraka ahiahy amin'ny fiarovana.
Mba hahazoana antoka fa mahazo bateria isika Apple original nandritra ny fanoloana dia nanoro hevitra anao izahay handeha amin'ny mpivarotra nahazo alalana Apple, na mankany amin'ny Apple Store mivantana. Raha mila adaptatera fanoloana ianao handoavana ny fitaovanao Apple dia ilaina ny hampiasanao ireo amidin'ny orinasa ireo.
Mbola averinay ihany koa ny maha zava-dehibe ny tsy fampiasana fitaovana famandrihana Apple sy tariby, fa ny fampiasana fitaovana MFi farafaharatsiny, ny telegrama toa ny Syncware na Belkin dia manome kalitao farany ambony amin'ny vidiny mihena ary miaraka amin'ny antoka Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple dia maniry ny hijanonan'ireo mpampiasa azy amin'ny charger sandoka
luisla dia hoy izy:
Eny, mazava ho azy ... Ary ny mpampiasa dia maniry ny hampijanonan'ny Apple ny famandrihana sandry sy tongotra ho an'ny charger tsotra misy ny sary famantarana ...
Mamaly an'i luisla
Ny kinova WatchOS 3.1.1 dia nesorin'i Apple